हे दैव ! कति असुरक्षित चेली ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
हे दैव ! कति असुरक्षित चेली ?
एकातिर यही पृथ्वीका मान्छे ज्ञान र विज्ञानको प्रयोग गरी पृथ्वीबाट अर्को ग्रहमा बसाइँ सर्ने तयारी गरिरहेका छन् । पृथ्वीकै अर्को कुनाका मान्छे बलत्कारमा उत्रिने, बोक्सीको नाममा मान्छेले मान्छेलाई कुटपिट गर्ने, मलमूत्र खुवाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने र मार्नेसम्मको अपराध गरिरहेका छन् ।
शक्ति राष्ट्रहरू संसारमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न कमजोर राष्ट्रहरूमाथि बम बर्साइरहेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग मानवजातिको हितमाभन्दा नरसंहारकारी युद्धमा लगाइरहेका छन् । संसार तमासे बनेर हेरिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रका शासकहरूको आफ्नो राष्ट्रलाई "महान" बनाउने होड बढ्दै जाँदा कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त हुने होइन ? सम्झदा पनि कहाली लागेर आउँछ ।
यता आफ्नो देश दस बर्षे गृहयुद्धबाट बल्लतल्ल तंग्रिदैँ छ । जनतामा शान्ति र समृद्धिको आशा जागेको छ । जनताका आवश्यकता र आकांक्षाहरू धेरै छन् । तर ती असंभव भने पक्कै छैन । मात्र नेताहरूमा दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति र इमान्दारिताको खाँचो थियो र छ ।
हाम्रो देशका राजनीति पार्टी र त्यसका नेता, कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक चेतनास्तर हेर्दा दया नै लागेर आउँछ । पहिल्यै जंगली युगमा मान्छे नाङ्गै बस्थे । पशुवत चेतना र जीवन थियो मान्छेको ।फेरी उही रुपमा पुग्दैछ मान्छे ! सामाजिक नियम, कानुन, मर्यादा, ढोंग, बन्धन सवै तोडेर साँच्चै नै आजको मान्छे निर्बन्ध हुन लाग्यो । पशु जस्तै ! अव यस्तै हुँदै जाने हो भने यो देशमा बुर्का लगाएर हिँड्नु पर्ने अबस्था नआउला भन्न पनि सकिएन ।
नेपाली महिलाहरूमाथि हुँदै आएका र भइरहेका शोषणका रूपहरू बहुरूपी छन् । लैंगिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यौनिक, शैक्षिक आदि इत्यादि ।के यो देशमा नारी भएर शुरक्षित रुपमा बाँच्न पाउनु दोष हो ? दुधे बालिका देखि वृद्धालाई सम्म नछाड्ने यौनपिपासुहरूलाई फाँसी दिने कानुन बनाएर नारीहरूको रक्षा गर्न किन हिचकिचाउँछ यो सरकार ?
हुन त बलात्कार राजा महाराजाको पालामा नचलेको होइन।त्यति बेला नि प्रशस्तै सुसारेहरु दिन दिनै बलात्कार हुन्थे तर चुप राखिन्थ्यो।अहिले आएर अलि अलि बाहिर ल्याउन थालेका छन। यस्ता घटना बढेका होइनन बाहिर आउन थालेका मात्र हुन ।
युक्ति नै छ नि , सानोमा वावाको अधिनमा, ठुलोमा पतीको अधिनमा र बुढेशकालमा छोराको अधिनमा रहनुपर्छ यो मान्यतावाट हामि नारीले मुक्ती पाउन सकेको छैन रैछ अझै पनि भन्ने कुराको एक ज्वलन्त उदारहण पछिल्लो घटनाक्रम ( महरा ) बाट देखिन्छ। नीती बनाउने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू" कति गैरजिम्मेवार ? कति अमानवीय र संवेदनाविहीन ?? यस्ता जनप्रतिनिधिबाट जनताले के आशा गर्ने ?
सामान्यत: नेपाली महिलाहरूका लागि कानुनी उपचार काकाकूललाई पानी बराबर भएको छ । समाजमा ब्याप्त रूढिवाद र अशिक्षाको कारण नेपाली महिलाहरूको ठुलो हिस्सा कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर छ । पहुँच भएकाहरू पनि पक्षपातको शिकार भएका छन् । देशमा कानुनका रक्षकहरू नै भक्षक भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । हरेक दिन एकपछी अर्का यस्ता खालका घटना आइरहदा देशकै बेइज्जत भएको छ । अब राज्य गम्भीर बन्ने बेला भएको छ वलात्कार बिरुद्ध सम्बन्धित सबै निकाए कठोर बनेर कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ। तर, हाम्रो देशको कानुन कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने निकाय यति कमजोर छ कि अपराधीहरू सजिलै छुट्न सक्छन् । यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन् । यो त हदैसम्मको अत्याचार भयो । कानुनका रक्षकहरू नै भक्षक देखियो ।म सरकारसँग जोडदार माँग गर्दछु । जनताको धैर्यताको बाँध फुट्नु अगावै शीघ्र अपराधीलाई कानुन अनुसार हदैसम्मको कार्बाही होस् । म यसै लेखमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहान्छु ।
यस्तो घटनाको जरा हाम्रो उत्पादन प्रणाली, शिक्षा, सामाजिक संरचना, लैंगिक विभेद, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परामा गएर गहिरोसँग गाडिएको छ । यी सबै ठाउँमा परिबर्तनविना यस्ता अमानवीय अपराधिक घटनाहरू घटित भइनै रहन्छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै परिबर्तनको जिम्मा कसले लिन्छ र कहिले हुन्छ ? हो, सबै आ-आफ्नो ठाउँमा जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु पर्ने यहीँनेर हो । यसको सबभन्दा मुख्य जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ । किनकि, राज्य भनेको सबैको अगुवा र अभिभावक हो । केवल कानुन बनाइदिएर, औपचारिक कुरा गरेर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने निकाय पनि त्यतिकै प्रभावकारी र बलियो बनाउन जरूरी छ ।
नागरिकहरू सधैँ निम्छरो बनिरहँदैनन् अब । न्याय पाउनु पर्छ । राज्यले नागरिकलाई न्याय दिनैपर्छ । हाम्रो सुरक्षा र न्यायको निम्ति हामी घर बाहिर निस्किसकेका छौं । हामी मैदानमा छौं ।